Muzinda weZimbabwe muBotswana neMuvhuro wakaita musangano wekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nemakambani avanodyidzaba nawo zvibviswe vachiti zvakanganisa hupfumi hwenyika.
Asi vebato guru rinopikisa reMDC Alliance varatidzira panze pemuzinda uyu muGaberone vachiti nyaya yehuori nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndiyo yapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama.
Vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika kubva kuChina, Russia meSaharawi Republic.
Musangano uyu unotevera chisungo cheSADC gore rapera kuTanzania kuti nyika dzemugungano iri nemuAfrica dzibatane mukurwisa zvirango izvo zvinonzi nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa zvakanangana nekupidigura hurumende yavo.
Asi vatsigiri veMDC Alliance varatidzira panze pemuzinda weZimbabwe vanosanganisira murongi wemabasa VaTaurai Mavhoko vati chapa kuti hupfumi hwenyika huende kumawere inyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yaVaMnangagwa.
VaMavhoko vaenderera mberi vachiti kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu ndiko chete kungakwezva vana muzvinabhizinesi kuti vauye kuzouchika mari muZimbabwe
Mumwe ange achiratidzira mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZimJustice VaTendai Mbofana vanoti SADC mukumira neZimbabwe iri kupesvedzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Asi mumiriri weZimbabwe muBotswana VaHenry Batiraishe Mukonoweshuro vaudza Studio7 kuti kuratidzira kwaita nevatsigiri veMDC Alliance kwashaya mutsindo nokuti pasi rose riri kumira neZimbabwe panyaya yezvirango.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chauya kuzocherechedza zuva iri ndiMuzvare Edith Kurwakumire avo vanoti hunhu hweMDC ndihwo huri kuita kuti zvirango zvisabviswe.
Kunyangwe hurumende iri kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru neAmerica, Britain nesangano reEU zvauraya nyika mumirii weAmerica muZimbabwe VaBrian Nichols uye mumiri weBritain muZimbabwe Amai Melanie Robinson vanoti nyaya yehuori ndiyo iri kupa kuti zvinhu zviite manyama amire muZimbabwe vashandi vachiramwa mabasa uye vakunze vachitadza kuzovamba mabhizimisi munyika nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Amai Robinson vati vanhu vemuZimbabwe vanofanira kusungunuka kutaura nyaya dzehuori uye vanotyora kodzero dzevanhu vanofanira kusungwa.